Kedu ihe ndị bụ isi e si n'aka Amazon ranking algorithm?
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ azụmahịa gị na Amazon, ị ga-amarịrịrịrị echiche mbụ nke Search Engine Optimization (SEO). O nwere ike iyi ka ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla, ma ihe ọ bụla masịrị ya (dị ka Google n'onwe ya, yana Yahoo, Bing, wdg. ) nwere ogo ya algorithm. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị ọchụnta ego n'ịntanetị na-ere ihe karịrị nke a amaghị na ọdịdị Amazon dị algorithm. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-egosi gị isi ihe Amazon ranking algorithm na-ịkụ nzọ na, kwadoro na ihe ndị bụ isi nke nchịkọta njirimara gị site na ngalaba. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-aghọta otu esi emepụta ọdịnaya dị mma maka ngwaahịa ngwaahịa gị. N'ikpeazụ, ịchọta ngwaahịa ị na-enye n'elu rịọ Amazon nke edepụtara n'etiti ngwaahịa kachasị ere.
SEO Faịlụ Nhọrọ maka Amazon Ịnye ọkwa Algorithm
Nke a bụ ihe ndị dị mkpa na ngwaahịa gị nke na-achọpụta ọnọdụ ọchụchọ gị Amazon.Ịmara ha niile ga - enyere gị aka ịghọta kpọmkwem ihe a ga - eme na njirimara nchịkọta ngwaahịa gị maka arụmọrụ kachasị nke ọma na ntanetị ịntanetị ka mma na ọkwa ọhụrụ.
Akụrụngwa ngwaahịa gị bụ akụkụ mbụ nke ngwaahịa Amazon gị nke na-ebute SEO dị mkpa karịa. Dị nnọọ ka ọ bụrụ na ọ dị na engines search engine, Amazon ranking algorithm dị ukwuu na-emetụta isi aha mkpado. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ihe odide 500 dịka ị ga-eji jiri mkparịta ụka ndị a kachasị echebara ọnụ na isi nyocha ọchụchọ ogologo maka iru mgbasa kachasị na ntanetị n'ịntanetị n'ebe ahụ.
Ọ bụ akụkụ ọzọ nke ngwaahịa ngwaahịa gị nke dị n'okpuru aha ngwaahịa. Ọ bụ ezie na ọ nweghị akwụkwọ akaebe ọ bụla iji gosipụta eziokwu a, mana okwu ntụle nwere ike inwe oke mmetụta maka ọganihu ị gbanwere. Na-eje ozi dị ka nchịkọta dị ọcha na nke doro anya nke ngwaahịa gị, ihe nkwụpụta bụkwa ebe dị mma iji tinye ụfọdụ n'ime isiokwu gị bụ isi nke nwere ihe ị na-ere n'ahịa ya.
Akụkụ ikpeazụ nke ama Amazon gị nke a na-ahụ maka ọbịa bụ nkọwa ngwaahịa gị. N'ezie, ọ bụ ụdị agbatị agbatị nke nchịkọta. Kedu ihe ọzọ - dị ka Amazon ranking algorithm, nkebi a bụ n'ụzọ na-enweghị isi, ma ọ dịkarịa ala maka na-ahụ maka njirimara ahụmahụ nzube. Ka o sina dị, inwe nkọwa zuru ezu nke ngwaahịa ka dị ezigbo mkpa. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwasa ọkwa nke ọma na Amazon.
Akụkụ a nke ederede backend na okwu ọchụchọ abụghị n'ezie maka ndị ọbịa gị. Mana ngalaba a bu kpọmkwem bu n'obi iburu mkpokọta nke okwu ozo di mkpa - nani maka ihe di elu. N'ụzọ dị otú a, cheta na Amazon kwadoro okwu mkpado bụ ebe kachasị mma iji tinye ihe niile ị na-eche na nke a na-etinyebeghị na aha ngwaahịa gị ma ọ bụ nkọwa ngwaahịa. MAYbe ị ga-enwe ohere dị mma iji laghachi na oge ụfọdụ ma mee ngbanwe ka otu akụkụ nke kachasị isiokwu dị mma na-eji dochie anya na-emeghị ihe na ngwaahịa aha gị, nkọwa, ma ọ bụ ndepụta nke isi okwu Source .